वायु प्रदूषण घटेको हो ? यसो भन्छन् विज्ञ – Gorkhali Dainik
वायु प्रदूषण घटेको हो ? यसो भन्छन् विज्ञ
April 9, 2021 179
काठमाडौं, उपत्यकामा आज बिहानको भिजिविलिटी ४५ सय मिटर रहेको छ । बिहीबार यही समय काठमाडौंको भिजिविलिटी दुई हजार मिटर थियो । बिहीबारको तुलनामा आज वायु प्रदूषण कम छ । तीन दिनसम्म पनि ठूलो पानी परेन र ठूलो हावाहुरी चलेन भने पुनः वायु प्रदूषण बढ्ने छ ।
लगातार डडेलो लाग्ने तर पानी नपरेका कारण केही समय यता काठमाडौं लगायत ठूला सहर तथा डडेलो लागेका स्थान तथा त्यसको वरपरका ठाउँमा वायु प्रदूषण उच्च हुँदै आएको छ । उच्च वायु प्रदूषणकै कारण अघिल्लो हप्ता सरकारले चार दिन देशभरका विद्यालय बन्द गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आँखा र नाक पोल्ने जस्ता समस्या देखिने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको थियो । अत्यावश्यक काम परेमात्रै घरबाहिर निस्किन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । देशका विभिन्न ठाउँमा एअर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) तीन सयभन्दा माथि पुगेपछि मन्त्रालयले नागरिकलाई यसबाट बच्न सचेत गराएको थियो । एक्यूआई तीन सयमाथि पुग्नु भनेको स्वास्थ्यका लागि खराब अवस्था रहेको वातावरण विभागले बताउँदै आएको छ ।
काठमाडौँ, भाईरल भारतिय ज्वाँई र नेपाली छोरी रुँदै छुटे, विबाह गरेको छोटो समयमा नै भारतीय ज्वाई राहुलले नेपाली चेलीलाई छाडेर जाँदा विमानस्थलमा मच्चियो रुवाबासी, नजानुहोस् न भन्दा नेपाली चेली धेरै बेर भक्कानिइन् ।
भाईरल भारतिय ज्वाँई र नेपाली छोरीको लोभलाग्दो प्रेम कथा यतिबेला भाइरल बनिरहेको छ । भारतीय ज्वाई राहुल र नेपाली चेली एरिकाले रुँदै नेपाल छाडेका छन् । यो जोडीको बिछोडमा उनीहरुले टिकाटाला लगाएर विमानस्थलमा पुग्दा विमानस्थलमा रुवाबासी भएको दृश्य भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
राहुलले नेपाल बसाईका क्रममा नेपालीहरुबाट आँफुले ठूलो सहयोग पाएको बताएका छन् । जाँदा जाँदै विमानस्थलमा एरिका आफ्ना पतिले छाडेर जाने समयमा भक्कानिएर रुँदै गरेको दृश्य भाइरल बनिरहेको छ । विमानस्थलबाट छुट्टिने क्रममा यो जोडीको रुवाई देख्दा उनीहरु गहिरो प्रेमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
Prevनागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार : दुई प्याकेजमा ४२ निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा
Nextआईपीएल आजबाट सुरु हुँदै
अब तीन महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने,
मेलम्चीको पानीको श्रेय कस्लाई दिने ? ओली , विना , भट्टराई ? अाफ्नो बिचार कमेन्ट गर्नुस
‘सम्धीज्यूलाई ७ पटकसम्म मिल्ने, कुलमानलाई दुई पटक किन नमिल्ने …..?’- गङ्गा चौधरी